२ रुपैयाँ दरको सिक्का आजदेखि बजारमा, दृष्टिविहीनले स्पर्श गरेर दर पत्ता लगाउन सक्ने « TopStar Khabar
नेपाल राष्ट्र बैंकले २ रुपैयाँ दरको सिक्का आजदेखि प्रचलनमा ल्याउँदैछ ।साविककै आकारमा सुनौलो रंगमा टकमरी गरिएको साल २०७७ लेखिएका २ रुपैयाँ दरका सिक्का आजदेखि बजारमा पठाइन लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले हालै मात्र १ र २ रुपैयाँ दरका सिक्का छापेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आजबाट बजारमा आउने सिक्काको वृत्ताकार घेराभित्र वरपर ६४ वठा थोप्ला छन् ।
सिक्काको माथिल्लो भाथमा अंग्रेजीमा आरएस टु र तल्लो भागमा देवनागरीमा २ रुपैयाँ लेखिएको छ । सिक्काको बीच भागमा सात प्रदेशसहितको नेपालको नक्सा रहेको छ भने नक्साको ठिक माथिपट्टी दायाँतर्फ फरक क्षमता (दृष्टिविहीन)हरूले स्पर्श गरेर सिक्काको दर पहिचान गर्न सक्ने दुईवटा थोप्ला रहेको छ ।
हर्नियाको उपचारका लागि निकै उपयोगी हुन्छ यो फल, यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका…?
परिवर्तित जीवनशैली, वातावरण, खानपान आदिका कारण हर्निया रोग तिब्र गतिमा फैलिरहेको छ। जब शरीरको कुनै भाग फुल्दै आउँछ, असहृय पीडा र पीडा पनि रोकिरोकि हुन्छ भने यो हर्नियाको सामान्य लक्षण हो।
यदि सही समयमा यसको उपचार भएन भने यो गम्भीर समस्या हुन सक्छ। त्यसैले यदि तपाईंले पनि आफ्नो शरीरमा त्यस्ता कुनै लक्षणहरु देख्नु भएको छ भने तुरुन्त चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ, जसका कारण स्थिति गम्भीर हुन पाउँदैन । आज हामी हर्नियाको बारेमा केही जानकारीहरु प्रस्तुत गर्दैछौं।
के हो हर्निया ? हर्निया विशेष गरेर त्यो समयमा हुन्छ, जब पेरिटोनियम (जुन मांशपेशीबाट बन्छ) मा कमजोरी आयो भने हर्निया हुन्छ। जसका कारण पेटको भित्रि भागमा आफ्नो नियमित स्थानमा रहँदैन र फुल्छ । त्यही स्थितिलाई हर्निया भनिन्छ।
कस्ता–कस्ता हुन्छन् हर्निया ? फिमोरल हर्निया: यस प्रकारको हर्निया सामान्यतया महिलाहरुलाई हुन्छ । महिलाहरुमा पनि विशेष गरेर गर्भवती र मोटोपनबाट ग्रस्त महिलाहरुलाई बढि हुन्छ । यो तब हुन्छ, जब आन्द्रा धमनी माथिल्लो फिलामा जाने नलीमा प्रवेश गर्छ ।
एसेन्सियल हर्निया: यस प्रकारको हर्नियामा पेटको सर्जरी हुने भागमा धेरै भार पर्नाले मांसपेशीहरु अत्यधिक तन्कन्छ, जसका कारण त्यो भाग फुल्छ।
नाभि हर्निया: यस प्रकारको हर्नियामा पेटको सबैभन्दा कमजोर मांसपेशीहरु नाभिको माध्यमबाट फुलेको रुपमा प्रकट हुन्छ । त्यस्तो विशेष गरेर मोटोपनले ग्रस्त महिलाहरु र त्यस्ता महिलाहरु जसको धेरै बच्चाहरु हुन्छन्,जसले बच्चा जन्माउँदा बारम्बार सर्जरी आदि कारणले उनीहरुको मांसपेशीहरु कमजोर हुन्छ ।
इन्गुइनल हर्निया: इन्गुनल हर्नियामा आन्द्रा अथवा मुत्राशय पेट भित्रबाटै फुल्छ अथवा पेट र तिर्घाको बीचको भाग इन्गुइनल नलीमा हुन्छ । यो विशेष गरेर त्यो भागमा भएको कमजोरीका कारण हुन्छ।
यस रोगबाट प्रायः महिला नै प्रभावित हुनुको कारण: महिलाहरुमा प्रायः पेटको हर्निया धेरै हुन्छ, किनभने गर्भवतीको क्रममा महिलाहरुको इन्टेरियर एब्डोमिनल वाल मसल्स तन्कन्छ। सर्जरी भएको ठाउँमा सबैभन्दा धेरै हर्निया विकसित हुने सम्भावना हुन्छ, किनभने त्यो ठाउँ सबैभन्दा धेरै तन्किएको हुन्छ । महिलाहरुमा हर्निया हुने मुख्य कारण मोटोपन हो ।
हर्नियाको चरणहरु, रिड्यूसिबल हर्निया: यस प्रकारको हर्नियामा सुत्दा शरीरमा भएको गाँठो गायब हुन्छ, तर खोक्दा अथवा हाछ्यँ गर्दा देखिन्छ । यदि गाँठोको आकार धेरै ठुलो छैन भने यसलाई नियन्त्रण अथवा कम गर्न सकिन्छ ।